Ị na-enwe a Halloween ọzọ, ị na-ekwu? Ọ bụ ukara na ọ Halloween ọzọ na-aga na oké music. Songs na a ajọ obi ụtọ na-ekwu okwu banyere obi ụtọ creepiness nke oge niile enyemaka-akpali gị iji nweta ke spooky spirit. Maghị ihe na-cue elu na gị na iPhone? Obi ike, ebe a bụ niile spooky Halloween omume-spiration mkpa ka ị mkpatụ gị otu! Ugbu a, ka ndị ọzọ na namalite!
"Super freak" bụ a song ezigbo maka kpọrọ na agbaji ice n'etiti ala ọzọ n'ozuzu, Halloween ọzọ nwere ike ịbụ oké fun na kwesịrị ekwesị music. Snazzy ekike, Punk jams na funky vibes. Nye mmalite nke gị ọzọ a pụrụ iche ighikota na nke a song na i nwere ike oké nkume nke Halloween ọzọ na Bang gị isi ebe ọ bụ na nke mbụ Cheta.
2. Mọ Town - The Ọpụrụiche
Onye ọ bụla na-eme ka na-alụ ọgụ anya nnukwu anụ, ghosts, vampires. Otu nke kasị ukwuu Hits si ska akụkọ na-emeghị, The Ọpụrụiche, nwere-apụghị ịgbagha agbagha eeriness gbara ya gburugburu, so mee ka ndabere vocals, na synthesized ghostly moans. Ọ bụghị nanị na ọ bụ ihe dị egwu song na captures mmetụta nke Halloween nke ọma, ma ọ bụ a jụụ song na pụrụ n'ezie ime ka gị agba egwú n'ala ka spontaneously combust ke bombu mgbawa nke ọṅụ.
Nke a Halloween ga-bụghị Halloween-enweghị "Monster Mash." Ọ bụ achọghị ịzụ ihe ịga nke ọma nkume 'n' mpịakọta novelti song niile oge. Bobby Pickett rụzuru obere feat nke iru n'elu 100 music chaatị 3 ugboro na otu song. On October 20, 1962, na mbụ ntọhapụ kụrụ ọnụ ọgụgụ otu ke United States. The song akanyam n'elu 4 nde na a catchy, ajọ omume, ecstatic, kacha Halloween stomp song ka a na-egwuri imerime ugboro kemgbe.
Ah !! ya Halloween!
Ọ dịghị egwu egwu! Nke a bụ eleghị otu nke kasị mma ike metal Halloween song! Anya site mere ịsụ na ịgba ọhịa, na song freating na-akpali akpali, ihu-smashing riff na oké olu, bụ ihe onu ire nke ụdị guru metal ike na-agaghị tụkwasịrị. Hey na nke a 13-nkeji onslaught nke dị ọcha epicness na ị ga-Bang gị isi dị ka e nweghị echi.
5. Season nke Witch - Donovan
Ikekwe ọzọ doro anya nhọrọ. Ole na ole songs nwere ọtụtụ mmetụta na B-egwu fim dị ka nke a psychedelic Donovan jam. 1972 si 'Season nke Witch,' si zombie-meister George A. Romero, na-agwa ndị creepy akụkọ nke a naghị arụ ọrụ ego na-dabbles na ịta amoosu. Nke a ojoo centric song nwetara a sexy ojoo vibe goin 'on na nwere omimi, beguiling aka ka ọ na-eme ka ị wanna mechie anya gi, ịṅụ mmanya gị na siwing ị butt.
Onye ị agbarapụ akpọ? GHOSTBUSTERS!
Dance oké nkume na mọ akụkọ nnọọ na-aga ọnụ. The Misfits song bụ ihe ọzọ na anọgidewokwa na-anyụ Halloween jam na nwere film site otu aha, were Halloween music notch. Kemgbe ahụ nwa ọhụrụ nke Halloween ọzọ kemgbe mmalite, "Ghostbusters" nkedo dị otú ahụ a anwansị na nke a orchestral na obiọma ochie gaferela music na na ada ụda otú ahụ ihe ọma ọ ga-eme ka ị na mkpịsị ụkwụ mgbata nke ukwuu.
7. High Way Hel -AC / DC
A song na narrates ọjọ harmonies! AC / DC si "High Way Hel" bụ a zuru okè na-akụ na mgbe nile na-enye a dị ike mmetụta uche resonance na gị na n'ezie boosts gị ume nso ogwugwu nke a tipsy ọzọ. The eerie ụda na lyricism ịkpalite oké akpata oyi na ịtọ N'ezie nke ọ bụla ọzọ n'ihi na tingly obi ụtọ na a n'ahụ joyride. Y'all ga-ezigbo oge a Halloween.
8. Nke a Bụ Halloween - Marilyn Manson
Isiokwu nke Tim Burton si 1993 animated music, "The Nightmare Tupu Christmas", kpuchie site Marilyn Manson na 2006, nke yiri kwa maa mma na-ahapụ nke playlist.
Atuak na ndị niile na nri chords, nke a song-ewe gị gagharịa niile spooky fun site na nke a Halloween mmasị òtù nzuzo kpochapụwo foto na ga-enye gị goosebumps oge ọ bụla. Ọ na-emekarị nke a eeriness araparawo gị isi mfe, kwa.
-Eche dị ka na-eme ka onye ọ bụla na-aga-ehi ụra na a egwu na ọnọdụ mgbe ọzọ? Nyefee gị Halloween listi ọkpụkpọ site na iTunes gị iPhone na-eso ya na ndị enyi gị n'abalị a! Na ị na ugbu a mere gị bed. Ugbu a na-enweta spooky lullabies!
Wondershare TunesGo bụ a zuru okè iTunes enyi gam akporo na iOS., Ime ka ị ijikwa music mfe na gị iPhone, iPad na Android. Na ya, i nwere ike nyefee music si iTunes ka iPhone / Android na ala. Download TunesGo mbubata Halloween songs ka iTunes, jikwaa gị Halloween ọzọ songs anatara, nyefee ndị a listi ọkpụkpọ iji iPhone, Android na ndị ọzọ.
> Resource> iPhone> 8 Terrifyingly Jụụ Halloween Songs jijiji Your Halloween Party